Galka Baarista oo shaaciyey xogta qaraxii Ex-Control iyo sida loo fuliyey (Daawo) – Hornafrik Media Network
Ciidanka Danab iyo kuwa Jubbaland oo in ka badan 10 Shabaab ah ku dilay J/Hoose
Turkiga oo cadeeyey mowqifkiisa sii socoshada dib u dhiska Soomaaliya
ONLF oo maamulka Mustafe Cagjar ku eedeysay inuusan fulin heshiiskii ay wada gaareen
Maxuu yahay ajendaha kulanka maanta ee baarlamaanka Galmudug?
Galka Baarista oo shaaciyey xogta qaraxii Ex-Control iyo sida loo fuliyey (Daawo)
By Liibaan Nuur	 On Jan 14, 2020
Ugu horeyn Barnaamijku waxa uu shaaca ka qaaday in qaraxaas ay xogtiisa horay u heysay hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA, weliba in Al-Shabaab ay qarax ka bedelan miinadii lageli jiray wadada dhinaceeda ay u qorsheeyeen shaqaalaha Turkiga ee ku howlan dhismaha wadada laamiga ah ee xariirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
Barnaamijku waxa uu xaqiijinayaa isagoo soo xiganaya Safiirka Turkiga ee Muqdisho Mahmed Yilmas, in xogta qaraxaas laga war helay in lala damacsanyahay shaqaalaha Turkiga ka jooga dalka, gaar ahaan ku dhisaya wadadaas aysan NISA la wadaagin Safaarada ama shirkadda gacanta ku heysay dhismaha wadada.
Galka Baaristu waxa uu soo bandhigay in gaari qarxay oo ahaa mid xamuul ah lagu soo diyaariyey deegaanka Buula-fulaay oo dhaca xuduuda gobolada Shabeellada Hoose iyo Bay.
Daqiiqado uun ka hor 8:00am subaxnimo maalinkii Sebtida ruuxa nafti haliga ah oo si is-daba joog ah u helayey xogta gaari HILUX ah oo ay la socdeen labo Injineer oo Turkish ah ayuu abaaray isaga oo xowli u socda xilli uu gaarigaas uu yari marayey isgoyska Ex-Control Afgooye ee Muqdisho.
Wasiiru dowlahii howlaha guud ee DF oo is-casilay
Shirkadda DP World oo mar kale ka guuleysatay dowladda Jabuuti
Liibaan Nuur	 Jan 18, 2020 0
Xog: Is-baheysi ka dhan ah dhismaha Galmudug oo bilaawday